DPA မိုက်ခရိုဖုန်းများသည်ကားများရေတွက်ခြင်းဖြင့်လမ်းမကြီးပေါ်သို့ | NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show LIVE ၏ထုတ်လုပ်သူ။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » သတင်း » DPA မိုက်ခရိုဖုန်းကားရေတွက်ခြင်းနှင့်အတူလမ်းမ Hits
screet ™ 4063 အသေးစားမိုက်ခရိုဖုန်း: သမိုင်း network ပေါ်မှာလူကြိုက်များအဖြစ်မှန်ရှိုးအသံရောနှောကုမ္ပဏီ၏ဃကိုအသုံးပြုသည်
Las Vegas, နိုဝငျဘာ 20, 2014 - Rado Stefanov များအတွက်သံကိုရောနှော ရေတွက်ကားများ, နာမည်ကျော်တစ်လှည့်ဖျား-off pawn ကြယ် အစီအစဉ်အဖြစ်မှန်ပြပွဲမှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့်အသံကရောစပ်တစ်မူထူးခြားတဲ့ချဉ်းကပ်ခေါ်ဆောင်သွားခဲ့သည်။ အဲဒီအစားရိုးရာစန်း technique ကိုသုံးပြီး၏သူအပေါ်မှီခို DPA မိုက်ခရိုဖုန်း '' ဃ: screet 4063 Omnidirectional အသေးစားမိုက်ခရိုဖုန်း အခွက်တဆယ်နှင့်ပတ်ဝန်းကျင်အသံဖမ်းနှစ်ဦးစလုံးသည်။ ယင်းသမိုင်းကွန်ယက်ပေါ်တွင်တင်ဆက် ရေတွက်ကားများ ဒန်နီ၏နေ့စဉ်လှုပ်ရှားမှုများ "ဒီအရေအတွက်" Koker နှင့်သူ၏ te Chronicles အရေအတွက်ရဲ့ Kustoms, Las Vegas မှာကားတစ်စီးနှင့်ဆိုင်ကယ်ပြန်လည်ထူထောင်ခြင်းနှင့်စိတ်ကြိုက်ကုမ္ပဏီတစ်ခုမှာဖြစ်၏။
အဆိုပါပြပွဲပုံမှန်အားဖြင့်တော်တော်လေးစိန်ခေါ်မှုရောနှောသံကိုအောင်, ထိုကဲ့သို့သောဒန်နီစမ်းသပ်မော်တော်ယာဉ်များမောင်းနှင်ရှိရာနီဗားဒါးသဲကန္တာရ၏အလယ်တန်းအဖြစ်အချို့သောတော်တော်လေးထူးခြားတဲ့တည်နေရာ, ဒါမှမဟုတ်လှံတံမှုန်ရေမွှားသူတို့ကိုဖျောရှိရာမိမိအဆေးသုတ်ဆိုင်ထဲမှာသေနတ်ဖြင့်ပစ်ခတ်ခြင်းဖြစ်သည်။ အဆိုပါ MICS ယာဉ်၏အမြန်နှုန်းအတူတက်ထားရန်မတတ်နိုင်ပါလိမ့်မယ်ဆေးသုတ်ဒါမှမဟုတ်အရေးယူဗန်နှင့်အတူတှရေဲ့တက်အဆုံးသတ်မယ်လို့အဖြစ်အစဉ်အလာစီးပွားရေးအလျှင်အမြန်တိုးတက်နေတဲ့ applications များပဲဒီထုတ်လုပ်မှုများအတွက်လုံလောက်မှာမဟုတ်ဘူး။ အဆိုပါ DPA ဃပါဝင်ပါသည်ထားတဲ့ဖော်စပ်ဖို့ Stefanov ရဲ့ "အဘယ်သူမျှမစီးပွားရေးအလျှင်အမြန်တိုးတက်နေတဲ့" ချဉ်းကပ်နည်း: screet 4063s နှင့် Zaxcom ကြိုးမဲ့က transmitter နှင့်မှတ်တမ်းများ, အဆုံးစွန်ဖြေရှင်းနည်းဖြစ်သက်သေပြခဲ့သည်။
"ဒီ DPA ရုပ်အသေးစားအတိအကျငါအခွက်တဆယ်သို့မဟုတ်မော်တော်ယာဉ်များ '' အင်ဂျင်များနှင့်အတွင်းပိုင်းအပေါ်တိုက်ရိုက်သူတို့ကိုစိုက်နိုငျသော ADDED အားသာချက်နှင့်အတူစန်း MICS ကဲ့သို့မြည်" Stefanov ကပြောပါတယ်။ ငါသာအမောင်းသူနှင့်ခရီးသည်များ၏အပြန်အလှန်ဆွေးနွေးမှု, ဒါပေမယ့်လည်းအစုံပေါ်သောကြွက်သားကားများသို့မဟုတ်ဆိုင်ကယ်၏ hum နှင့်အသံဗလံမှတ်တမ်းတင်မနိုင်အဖြစ် "ဒီစမ်းသပ်မှု drive ကိုမြင်ကွင်းများစဉ်အတွင်းအထူးသဖြင့်အသုံးဝင်သည်။ အဆိုပါ DPA MICS ၏အဓိကအားသာချက်သူတို့အလွန်ကျယ်လောင်သောအသံသည်သတင်းရင်းမြစ်ကိုကိုင်တွယ်နိုင်ပြီးကျနော်တို့ကအရမ်းဆူညံကားတစ်စီးနှင့်ဆိုင်ကယ်အသံအလွန်နိမ့်ဆွေးနွေးမှုကနေသွားရသည့်အခါလမ်းမှမလွှဲပါလိမ့်မယ်ဆိုလိုတာကမြင့်မား SPL, ရှိသည်ဖြစ်၏။ "
ကြောင့် Stefanov ရဲ့ Mike စတိုင်ဖို့, ဒစ်ဂျစ်တယ်ကြိုးမဲ့စွမ်းရည်ကိုလည်းဒီထုတ်လုပ်မှုမရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်။ "အခြား MICS ၏တစ်ဦးကအများကြီးကွန်နက်ရှင်ငါ၏အ Zaxcom ဒစ်ဂျစ်တယ်ကြိုးမဲ့စနစ်ဖြင့်ပြဿနာများ, ဒါပေမယ့်မ DPA ဃရှိသည်: screets" ဟုသူကထပ်ပြောသည်။ "DPA ငါ၏အတည်ဆဲ setup ကိုအတူဿုံကိုက်ညီသည့် adapter ရှိပါတယ်, ဒါကြောင့်ငါပြည့်စုံသောရောနှောဖန်တီးငါ့အလိုရှိသမျှအာရုံကိုအာရုံစူးစိုက်ခွင့်ပြုထားတဲ့, အ MICS လူအပေါင်းတို့သည်အချိန် rewiring နှင့်အတူကိုင်တွယ်ရန်မလိုပါ။ ငါ set ကိုပယ်တည်ရှိပြီးနှင့်၎င်းတို့၏ရိုက်ချက်၏လမ်းထဲကတာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒါဟာအစ, အဒါရိုက်တာများနှင့်ကင်မရာအမှုထမ်းကူညီပေးသည်။ ငါ DPA ဃနှင့်နေသည်ထက်ဒီပြပွဲမှတ်တမ်းတင်ဖို့ပိုကောင်းတဲ့လမ်းမစဉ်းစားနိုင်သည်။ screets "
မှစ. ရေတွက်ကားများ ထိုကဲ့သို့သောကွဲပြားဆောင်ပုဒ်ရှိပါတယ်, ပြပွဲလည်းအချို့သောမဟုတ်ဘဲစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းအစုံပါရှိပါတယ်။ တဦးတည်းမြင်ကွင်းတစ်ခုမှာအဖွဲ့သည်အခြားခုနှစ်, သင် Koker နွေရာသီ၏အလယ်ရှိနီဗားဒါးသဲကန္တာရကိုဆင်းပြိုင်ကားကိုရှာဖွေစေခြင်းငှါနေစဉ်ကားများ buffing နှင့်ပန်းချီ, ဆိုင်အဆောက်အဦအတွက်ဖြစ်ပေလိမ့်မည်။
"ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင် DPA MICS ပတ်သက်. အကောင်းဆုံးအရာကျွန်တော်တို့ရဲ့ထား၏အစွန်းရောက်သောအခြေအနေများကိုဆီးတားဖို့သူတို့ရဲ့စွမ်းရည်ဖြစ်ပါတယ်" ဟု Stefanov နေဆဲဖြစ်သည်။ "ဒီ MICS အပူမှတက်ကိုင်ဆက်လက်ပေမယ့်သူတို့ကသဲကန္တာရ, High-အလျင်မှုတ်ဆေးနှင့်သတ္တုလုပ်ကြံလီဆယ်မှုများ မှစ. , ဆေးသုတ်ခြင်းနှင့်မြေမှုန့်အမှုန်ဖယ်ရှားပစ်ရန်ဖွင့်လှစ်ခြင်းနှင့်သန့်ရှင်းနိုင်သည့်တစ်ခုတည်းသော MICS ဖြစ်ကြသည်ကြဘူးမသာ။ ငါ့မိုက်ခရိုဖုန်း၏အသက်တာ၏အသက်ရှည်သေချာအဖြစ်ဒီပြပွဲ၏ထူးခြားသောအခြေအနေများအဘို့အထူးသဖြင့်စံပြပါပဲ။ "
လောလောဆယ်လာမယ့်ရာသီအတွက်ထုတ်လုပ်နိုင်ရေးအတွက်, ရေတွက်ကားများ ITV Studios က, ITV, plc တစ်ဗြိတိန်နိုင်ငံအခြေစိုက်ထုတ်လွှင့်များ၏ထုတ်လုပ်မှုလက်မောင်းများအတွက် Leftfield Productions ကထုတ်လုပ်တာဖြစ်ပါတယ်။ Koker, အရေအတွက်ရဲ့ Kustoms များ၏ပြပွဲနှင့်ပိုင်ရှင်၏ကြယ်ပွင့်များ၏အများအပြားဖြစ်စဉ်များအပေါ်သည်ထင်ရှားခဲ့ပြီးနောက်အဆိုပါပြပွဲသည်၎င်း၏က start တယ် pawn ကြယ်။ ဇာတ်ကောင် / န်ထမ်းများ၏ပြပွဲရဲ့ supporting သွန်းကီဗင် Mack, Koker ရဲ့အကောင်းဆုံးမိတ်ဆွေနဲ့ညာလက်ရုံးသည်လူတို့ပါဝင်သည်; "Horny သူ Mike," အရာအားလုံးအပေါ်ဦးချိုချပြီးများအတွက် knack နှင့်အတူဆိုင်ရဲ့ဆေးမှုတ်အနုပညာရှင်; နှင့် Big ရိုင်ယန်, ပန်းချီဆရာရိုင်ယန်အီဗန်နှင့်အတူရောထွေးခံရဖို့မသူ Koker ရဲ့နီးပါးခုနစ်ခြေလျင်အရပ်ရှည်ရှည်စီမံကိန်းကိုကင်းထောက်; အခြားသူတွေအကြား။
DPA မိုက်ခရိုဖုန်းအပေါ်ပိုမိုသောအချက်အလက်များအဘို့, သွားရောက်ကြည့်ရှုကျေးဇူးပြုပြီး www.dpamicrophones.com.
2014 NAB ပြရန်, NAB ပြရန် 2014 audio အသံလွှင်း 2014-11-20
ယခင်: အားလုံးအိန္ဒိယရေဒီယိုနယူး NETIA နယူးဒေလီဌာနချုပ်နှင့်အိန္ဒိယနိုင်ငံတစ်ဝှမ်း 48 စခန်းများမှာတိုက်ရိုက်ဆော့ဝဲရေဒီယို-Assist ယူ
နောက်တစ်ခု: PESA ဟန်ပြလွှ Solutions, GV ကုန်စည်ပြပွဲမှာ JITC-လက်မှတ်ဖြန့်ဖြူးဂီယာ